Home Somali News Ethiopia: Obama oo amaaney dagaalka Ethiopia kula jirto Al Shabaab
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo booqasho ku jooga magaalada Addis Ababa ayaa amaan balaaran ujeediyey kaalinta Dowladda Itoobiya ee arrimaha Soomaaliya.
Shir Jaraa’id uu qabtey maanta oo isniin ayuu sheegay in Ciidamada Itoobiya guulo waaweyn kasoo hoyeen dagaalka kula jiraan argagixiisada gaar ahaan ururka al-Shabaab isla markaana dhowaan kala wareegeen labo magaalo oo saldhig u ahaa.
Mr Obama ayaa sidoo kale weerarkii shalay ee hotelka Aljazeera ee ismiidaaminta ku tilmaamey mid muujineysa in ururada argagixiisada sida al-Shabaab hadafkoodu yahay in ay wax dilaan isla markaana burbur geystaan.
Wuxuu ku baaqay in la iska kaashado sidii loo cirib-tiri lahaa.
Hadalkan ayuu jeediyey kadib markii uu wada hadal la yeeshay Ra’iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Hailemariam Desalegn, waxaana arrimaha ay ka wada hadleen kamid ahaa la dagaalanka argagixiisada.
Ciidamo ka badan 4,000 askari oo Itoobiya ayaa ku sugan Koonfurta Soomaaliya, waxaana ay kamid yihin Ciidamada AMISOM ee kamid ah howlgalka nabad ilaalinta ee Midowga Afrika.
Todobaadkii hore ayay ahayd markii ay Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda Federaalka ay al-Shabaab ka qabsadeen magaalooyinka Baardheere iyo Diinsoor oo ahaa labadii magaalo ugu dambeeyay oo xagjirinta al-Shabaab ku xooganayeen.
Wasiir Waran Cade Oo Sheegay Inay Xukuumada Somaliland Hubkii La Wareegtay Jawaab Kululna Ujeediyey Putland